नाब्रानमा गर्मी याम – सागओल अजरबैजान | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: नाब्रानमा गर्मी याम – सागओल अजरबैजान ★ उषा हमाल★ प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १५, २०७१
लेखक : उषा हमाल विधा/श्रेणी : पुस्तक अंश रचना संख्या :2प्रकाशन मिति : सोमबार, मंसिर १५, २०७१ उषा हमालका अरु रचनाहरु अजरबैजान हावापानीका दृष्टिले अलि अनौठै छ— हिउँदमा माइनस ३०० सेल्सियमा झरेको तापक्रम गर्मीमा ५०० सम्म पुग्छ। त्यसैले होला, हिउँदको जीवनशैली र गर्मीका दिनहरुमा आकाश–जमिनको भिन्नता हुन्छ— कुनै तादात्म्य हुँदैन जाडो र गर्मीबीच उठाइबसाइ, लवाइखवाइको। ग्रीष्म ऋतुमा मानिसहरु ज्ााडोमा भिरेका लुगाका भारी फ्याँकेर पातला पारदर्शी लुगामा हिँडिरहेका देखिन्छन्। अझ केटीहरुको त के कुरा! उनीहरु गर्मीका खाँटी युरोपेली वेशभूषामा यत्रतत्र देखिन्छन्, सौन्दर्य प्रदर्शन गर्दै।
हामी पनि के कम? मुकुन्दको कार्यालयको बैठकमा बाकु गएर त्यतैबाट हान्नियौं नाब्रानतिर— मुकुन्द, साला, सैमुर र म गर्मीमा छुट्टी मनाउन।
बाकुबाट नाब्रान जाँदा बाटोमा पर्ने सुम्गायत सहरमा केही खानेकुरा किन्ने योजना बन्यो। समुद्री किनारको जिल्लामा समुद्रसँगै जोडिएको सानो तर व्यवस्थित सहर। हेर्दा सुन्दर तर सँगै रहेछ पुरानो फलामे संरचना। त्यो पनि सानो होइन, आँखैले नभ्याउने विशाल क्षेत्रमा फैलिएको। फलामका डन्डीहरु आपसमा जेलिएर मानवअस्थिपञ्जर जस्तै देखिने त्यो संरचना खिया लागेको कुरुप अस्तित्व असरल्ल देखाउँदै बसेको छ। मैले कहिल्यै कल्पनासम्म गरेकी थिइनँ, यतिबिघ्न फलामको अस्थिपञ्जरबारे तर आँखैअगाडि देख्ता त आश्चर्यचकित भएँ।
यही रहेछ क्यामेलाले मलाई भनेको सुम्गायत— साम्यवादले बनाएको तर वर्तमान अजरी सरकारले बचाउन नसकेको अजङको फलामे कारखाना।
सुम्गायत सोभियत समयको औद्योगिक क्षेत्र, साम्यवादी शासनमा स्थापना गरिएका विविध उद्योगहरुको एकीकृत परिसर। पहिले त्यहाँ फलाम, रसायन र औजारहरु उत्पादन गरिन्थ्यो भन्ने पनि थाहा भयो। उद्योगहरु चालु छँदा सो क्षेत्रबाट निस्किएको प्रदूषणले त्यहाँको जनजीवनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको रहेछ। विशेष गरी बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य बिग्रने, मानिसको कपाल छिट्टै फुल्ने जस्ता समस्या प्रशस्त छन्।
औद्योगिक उत्पादन केन्द्र्रीकृत गर्ने चलनले होला, साम्यवादी शासनमा यस्ता हानिकारक उद्योगहरु प्रायः सोभियत सङ्घभित्रका त्यस्तै साना देशमा खोल्ने गरेको रहेछ। त्यस्ता मृत उद्योगहरु अजरबैजानका धेरै ठाउँमा देखिन्छन् तर सुम्गायत सोभियत समयको विशेष औद्योगिक क्षेत्र रहेछ।
ग्यान्जामा हामी बसेको ठाउँबाट तीन–चार किलोमिटरको दूरीमा पनि एउटा विशाल फलाम कारखाना छ। त्यसबाट निस्किएको रसायनको प्रदूषणले आसपासको खेतीयोग्य जमिन बन्जर क्षेत्रमा परिणत भएको छ। त्यस्तै सोभियत समयमा बनेका विशाल उद्योगहरु, पहाडबाट ढुङ्गा ओसार्ने रोपवेहरु प्रायः सबै मृत अवस्थामा कुरुप अस्थिपञ्जर देखाएर बसेका छन्। उद्योगहरु चालु गर्नु त के, ती ‘गारबेज’ हटाउन मात्रै पनि अजरी सरकारसामु ठूलो चुनौती भएको छ।
फलामे अस्थिपञ्जरको अवलोकनपछि बाटो सोझियो नाब्रानतिर। समुद्री किनारको चौडा र खुला बाटोमा हाम्रो गाडी गुडिरह्यो उच्च गतिमा। अगिको कुरुप दृश्यबाट रित्तिएको मेरो मन फेरि भरिएर आयो। समुद्री किनारको लामो बाटोले सुम्गायतमा भरिएका मृत उद्योगका कङ्कालका तस्बिरहरु मानसपटलबाट हट्तै गए।
मन रमाउन थालेकाले यात्रा जीवन्त बन्दै गयो। सुम्गायतबाट गुडेको करिब पाँच घण्टापछि हामी नाब्रान पुग्यौं।
अजरबैजानको नक्सामा उत्तरमा पर्छ नाब्रान। क्यास्पियन सागरको ओल्लो किनारमा रहेको नाब्रान जस्तै पल्लो किनारमा रहेछ तुर्कमेनिस्तान— समुद्री किनारमा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण।
पौडी खेल्न बनाइएका समुद्री किनारसँगै बस्नका लागि पनि चिटिक्क परेका कटेज र रिसोर्टहरु छन्। साथमा सैमुर र साला भएकाले हामीले नजिकैको उच्च क्षेत्रमा बनाइएका दुइटा कटेज लियौं— आनन्दले सामुद्रिक दृश्यावलोकन गर्न। अजरबैजानमा गर्मी यामतिर बाटो छेउछाउ प्रशस्त रेस्टुराँ खुल्छन्। तर नाब्रानमा त्यस्तो होइन, खुला ठाउँमा सामुद्रिक दृश्य देखिने गरी बनाइएका स्थायी रेस्टुराँ। खुला आकाशमुनि टेबलकुर्सी भएका रेस्टुराँबाट सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको दृश्यवलोकन हुन्छ।
दिउसो त्यहाँका प्रायः सबै मान्छे घरभित्रै बस्ता रहेछन्— घामले डढ्ने डरले। पौडी खेल्ने समय भनेकै बिहान वा बेलुका रहेछ। करिब चार–पाँच बजेतिर हामी त्यहाँ पुगेकाले हाम्रो पनि पालो आयो— समुद्री किनारतिर टहल्ने, छालमा हेलिने र पौडी खेल्ने। मबाहेक सबै पौडीबाज, हाम्रो समूहमा।
इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने मलाई पौडी खेल्न आउँदैन। एक पटक मुकुन्दले मलाई पौडी खेल्न सिकाउँदा झन्डै मरेकी। तर ‘स्विमिङ कस्टम’ लगाएर पानीमा डुबी छालमा हेलिएर बस्न आनन्द लाग्छ मलाई, अरुले पौडी खेलेको हेरेर। मुकुन्दहरु पौडी खेल्न समुद्रमा पस्छन्, निस्केर स्टलहरुमा पस्तै चिसो लिएर आराम कुर्सीमा पल्टन्छन्।
सूर्यास्तमा समुद्रमा परेको सूर्यकिरणको दृश्य अद्भुत हुँदो रहेछ— छालहरुसँगै सूर्य पनि गुजुल्टिँदै कुदिरहेजस्तो। सूर्यास्तमा समुद्रपारि क्षितिजमा विशाल गोलाकार देखिने रातो सूर्य ज्वालामुखीझैँ आफ्नो अद्भुत स्वरुप समुद्रका छालहरुमा फ्याँक्तो रहेछ। आफूलाई निमेषभरमै कलात्मक स्वरुपहरुमा परिर्वतन गरिरहँदो रहेछ।
अँध्यारो नहुन्जेल म भोजनकक्षको खुला ठाउँमै बसें। उज्यालो धमिलिएर क्रमशः अँध्यारिँदै गएको रङ्गिन प्रकाशमा समुद्रमा बन्ने चमत्कृति अवलोकन गरिरहें मैले, एकाग्र भएर।
उनीहरु तीनै जना समुद्रबाट निस्किएर भोजनकक्षतिर आए। खाना आउन्जेल हामी चारै जना गफियौं। भाषा प्रयोगको अवस्था अनौठो छ— म र मुकुन्द नेपाली बोल्दा साला र सैमुर बुझ्दैनन्, साला र सैमुर अजरी बोल्दा मुकुन्द र म बुझ्दैनौ। मुकुन्द, म र सैमुर अङ्ग्रेजी बोल्दा साला बुझ्दैन तर पनि कोही सञ्चारबाट वञ्चित छैन। सबैको कुरा रुपान्तरण हुँदै हाम्रो वृत्तमा घुमिरहन्छ। फरक यत्ति हो— हाँस्ने पालो कसैको अगाडि आउँछ, कसैको पछाडि।
खाना आइपुग्यो; बियर, वाइन, कोक, फेन्टा; आफ्नो रूचिअनुसार पिउने। होटल कर्मचारीहरुले माहोल अझ आकर्षक बनाउन मन्द आवाजमा अजरी शास्त्रीय सङ्गीत बजाए।
वाह! त्यसै बेला चन्द्रोदय भयो; मन्द, शीतल ज्योत्स्ना फैलियो समुद्रभरि। साँझको शान्त समुद्रमा दिउसो देखिएजस्ता विशाल लहरहरु देखिँदैनन्। तर सौर्न्दयको के कुरा— शान्त! शीतल! गम्भीर! स्निग्ध! विशाल छाती थापेर स्वागत गर्‍यो चन्द्रमालाई समुद्रले; गम्लङ्ग अँगालो हालेर चुम्बन गर्‍यो।
करिब बाह्र बजे राति मात्र हामी त्यहाँबाट उठ्यौं र लाग्यौं आआफ्नो कटेजतिर।
बिहान अलि अबेरसम्म सुतिएछ। ब्रेकफास्टपछि दश बजेतिर हामी कटेजबाट निस्कियौं दृश्यावलोकनमा। हामी बसेको ठाउँबाट करिब पाँच–सात किलोमिटर पर समुद्र साँघुरिँदै गएर दुवैतिरबाट पहाड छुन खोजेको ठाउँ रहेछ। गाडी तल बाटोतिरै राखेर करिब दश मिनेट उक्लियौं पहाडतिर। घना जङ्गल; शान्त, शीतल रुखका छहारी आराम गर्नलाई। कुर्सी, टेबल राखेर बनाइएका खुला रेस्टुराँ; जहाँ चिया, खाना अर्डर गर्न सकिन्छ। त्यहाँको सामुद्रिक दृश्य फरक छ— छालहरु पहाडमा गएर ठोक्किँदै फर्किएका दृश्यहरु हेर्नलायक छन्। समुद्रभित्र विशालकाय माछाहरु उफ्रँदै आकाशमा निस्कन्छन् र फेरि पानीमै पछारिन्छन्। चराहरु (सी गल्स) समुद्रमाथि उडेर माछा छोप्ने प्रयत्न गरिरहन्छन्। एसिया, विघटित सोभियत सङ्घका छिमेकी देशहरु र पूर्वी युरोपतिरबाट पनि पर्यटक आउँदा रहेछन् त्यहाँ छुट्टी मनाउन।
दृश्यावलोकनको आनन्द लिँदै हामीले चिया पियौं। “अब त लन्चको समय भयो”, मैले सम्झाएँ। ‘अरु केही दिन यतै बिताउने कि!’ सबैले मेरो आशयमा समर्थन जनाए तर कुरा आयो पैसाको। हामीले आआफ्नो खल्ती हेर्‍यौं— ला! पैसा त कसैसँग पनि पुग्दो छैन। गोजी रित्तिन थालेको कसैलाई पनि हेक्का रहेनछ। भोलिपल्टै फर्कने योजनाअनुसार पनि आवश्यक खर्चका लागि पुग्दैन पैसा।
‘अब के गर्ने?’ सालाले उपाय निकाल्यो— “लन्चका लागि रेस्टुराँ नजाने, डिनर पनि रिसोर्टमा नगर्ने।”
अनि हामीले पसलबाट रोटी, काँक्रा, गोलभेंडा, गाजर र पिउने कुराहरु किनेर जङ्गलको चौरमा बसी वनभोज मनाउँदै खाना खायौं। साँझका लागि पनि त्यसरी नै किनमेल गरेर राख्यौं।
रिसोर्ट फर्के पनि हाम्रो काम त छँदै छ— समुद्री किनारतिर टहलिने, पौडी खेल्ने, समुद्रका लहरहरुसँग बहकिने, छालसँग जिस्किने। तर अगिल्लो दिन जस्तो स्फूर्ति रहेन कसैसँग। पौडी खेल्यैपिच्छे स्टलहरुतिर कुद्ने काममा कमी आयो। किन नघटोस् स्फूर्ति— गोजी जो रित्तिँदै थियो। म पनि निकै बेर खेलिरहें समुद्रका छालहरुसँग। लागिरह्यो— के थाहा, यो अवसर जीवनमा फेरि आउला–नआउला? आए पनि कुन रुपमा कसरी आउला? यस्तो स्वच्छन्दता आफ्नो जीवनमा विरलै पाइने कुरा हो। म यसको भरपूर उपयोग किन नगरुँ?
भोलिपल्ट अलि चाँडै त्यो ठाउँ छोड्नुपरेकाले बिहान पाँचै बजेतिर हाम्रा आँखा खुले। सूर्योदयको समुद्र हेर्न बाँकी नै थियो। किन छोड्थें त्यो अवसर? निस्किएँ एक्लै प्रभाती दृश्यावलोकन गर्न।
हेर्दाहेर्दै सूर्योदयपूर्व हलुका रातो देखिएको समुद्र सूर्योदयमा सुनौलो र सूर्यको उचाइसँगसँगै सेतो भयो। समुद्रले रङ्ग फेरिरहँदा सतहमा पिकासो शैलीका कलाहरु निमेषमै बने र निमेषमै हराए। मोतीका एकएक दाना भएर पोखियो सूर्य विशाल समुद्रमा। हेर्दाहेर्दै समुद्रको पर्दामा मञ्चन भइरहेको सूर्यको नाटक सकिएर उसको स्थिर स्वरुप देखिन थाल्यो— लहरहरु सेता भएर गुजुल्टिन थाले।
मेरो मन भरिएन तर समयचेतनाले मलाई फर्कने आदेश दिइसक्यो। कति समय बित्यो? कति टाढा हिँडिसकें, मलाई अन्दाजै भएन। प्रिकुलीको हिउँको जङ्गलमा हराएकी थिए। त्यस्तै समुद्री किनारमा पनि म हराएँ।
म फर्कने क्रममा थिएँ। किनारैकिनार हिँड्दा मैले सिपीका खबटा देखें। ती फुटेर माटो, बालुवा जस्ता भएर पनि थुप्रिँदा रहेछन्। म आफूले लगाएका चप्पल निकै वर छोडेर नाङ्गै खुट्टा हिँडिरहें। मेरा पाइतालाहरुले ती सिपीहरुलाई अनुभव गर्न थाले। सिपीका सिङ्गा खबटाहरु दुवै हातमा अटाएजति लिएर म फर्किएँ।
मुकुन्दहरु मलाई ब्रेकफास्टका लागि पर्खिरहेका रहेछन्। म फर्केर आउँदा बालुवा र सिपीका खबटाहरुमा दरफरिएर पाइतालाहरुबाट रगत आउन थालेको रहेछ। मेरो बहुलट्टीपूर्ण हिँडाइ र पाइतालाको हालतले रमाइलै माहोल बनायो।सबैले मलाई जिस्क्याउँदै हाँस्न थाले।
उखरमाउलो गर्मी छ— ५०० सेल्सियस। गाडीमा हामी निदाउन खोज्छौं— साला कराउँछ। हामी निदाउँदा ऊसमेत झकाउने डर हुँदो रहेछ। गाडीको गति तीव्र पारे पनि साँझ मात्र हामी ग्यान्जा पुग्यौं। यो यात्रा पनि कम संम्कनलायक रहेन।
(उषा हमालको पुस्तक सागओल अजरबैजानबाट)
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : संस्मरण: खिच्न नसकेको फोटो हनी पफ संस्मरण : युद्दभूमी इराकको यात्रा मदन पुरस्कार प्राप्त ‘एेना’ भित्रको एउटा कथा : पापीघाट मध्यरातमा चौराह देखि क्याम्पसचोकसम्म पुस्तक अंश – करोडौं कस्तुरी छालमा रुझेकी उ छोक सागओल दोस्तलार नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com